Musharax soomaali ah oo isa soo sharaxay Norway, balanqaadna u sameeyay jaaliyadda Soomaalida Oslo(Daawo Sawiro iyo waraysigi Musharaxa) | raascasayrmedia.com
← Maakhir State iyo Puntland waa Lama Maamul Goboleed [Dhegayso]
Burcad badeeda Soomaaliyeed oo qabsaday markab laga lee yahay Vietnam →
January 20, 2011 · 10:38 pm
Musharax soomaali ah oo isa soo sharaxay Norway, balanqaadna u sameeyay jaaliyadda Soomaalida Oslo(Daawo Sawiro iyo waraysigi Musharaxa)
Kulan jaaliyada soomaalida Oslo isugu diyaarinayso doorashooyinka dawladda hoose (Kommune-ka) ee inagu soo fool leh islamarkaana uu soo agaasimay Mushrax, Baashe maxamed Muuse ayaa ka dhacay xaafadda Gamle Oslo ee caasimadda dalka Norway.
Baashe Muuse oo ah musharax ka tirsan xisbig shaqaalaha (Arbeiderpartiet, AP), islamarkaana magac iyo maamuus ku dhex leh jaaliyadda Soomaalida ayaa kulankan soo qaban-qaabiyay waxaana uu isa soo hor fariisiyay gabadha lagu wado in ay hogaamiso golaha deegaanka Oslo (Oslo Kommune) ee xisbigiisa Libe Riber-Moen.
Xaafadda Gamle Olso ee uu shirkani ka dhacay ayaa waxaa ku nool in 2.300 oo soomaali ah, waxaana kulanka kasoo qeyb galay in ka badan 120 ruux oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida magaaladan oslo.
Soomaalidii soo xaadirtay shirka ayaa isugu jiray waxgrad, madaxdhaqameedyo uu hogaaminayay suldaanka guud ee jaaliyadda Norway suldaan Bashir Maxamed Geele, duuliye sare Shahar Cabdi Afrax oo isna ah afhayeenka ururka G-10 ee dalkan Norway, aqoonyahano, haween dhallinyaro iyo culmaa`udiin.
Shirka ayaa waxaa hadalo iyo mahadnaq ka jeediyay masuuliyiintii kasoo qeyb gashay ee isugu jiray Soomaali iyo norweji oo ay ugu horeysay haweeneyda u sharaxan jagada Golaha deegaanka Oslo, waxayna si niyad sami ah ugu sheeegtay ka qaybgalayaasha shirka inay ka mid noqdaan xisbiga (AP), codkoodana ku taageeran haweenayda u sharaxan hogaanka magaalada Oslo, Libe Riber-Moen oo ka tirsan xibiga shaqaalaha.
Suldaanka guud ayaa ka codsaday kasoo qaybgaleyaasha shirka inay codkooda siiyaan Bashe Maxamed Muuse oo ah xubin fir-fircoon oo si hagar la`aan ah ugu adeega dadkiisa..
Sidoo kale waxaa kulanka hadalo ka jeediyay Amal Hassan oo ah ardayad cimiga daryeelka dhallaanka iyo Asma Chaudhari oo ah khabiir cilmiga daryeelka bulshada.
Doorashada waxaa loo ogolyahay in ay ka qeyb qaataan inta haysata daganaanshaha dalka iyo wixii sadexsano in kabadan joogay Oslo.
Ugu dambeyn Baashe Muuse ayaa u balan qaaday Soomaalida ku dhaqan caasimadda Oslo in hadii uu soo boxo, codkana ay siiyaan soomaalida uu laba jibaari doono dadaalkii ay horay uga barteen islamarkaana xoogga saari doona caawinta dadka Soomaaliyeed.
Baashe Muuse ayaa ah afhayeenka Jaaliyadda Soomaaliyeed Norway, waxaana uu ka difaacaa soomaalida dhanka saxaafadda oo aalaaba lagu dhaleeceeyo.
Wixii talo iyo tusaale ah kala xiriir Musharax: BAASHE MUUSE cinwaanka ah: